Uma unombuzo mayelana ne-lapho ehhovisi lenkampane "Yandex" e Moscow, impendulo isobala. iminyaka engu-10 edlule ehhovisi yayisesigodini endaweni ezahlukene, kodwa kuze kube manje uye washintsha ngempumelelo indawo yakhe. Ihhovisi eyinhloko "Yandex" eMoscow itholakala izakhiwo eziningana isikhungo ibhizinisi "Red Rose" ku Lva Tolstogo Street. Sekukonke, inani ongoti inhlangano "Yandex" ingaphezu anamathandathu amawaka, abantu abayizinkulungwane ezine bukhoma eMoscow. Inkampani ochwepheshe emikhakheni ehlukahlukene. Kukhona abakhiqizi amasevisi ahlukahlukene, abaphathi project kanye technical support.
Iningi amaqembu bahlala eMoscow, eYekaterinburg futhi Petersburg. Njengoba ubona, isiphequluli ozokhula hhayi kuphela Muscovites, kodwa futhi Ochwepheshe kusukela Kiev naseNovosibirsk. "Yandex" ihhovisi omkhulu eMoscow akuhlukile emagcekeni kweminye imizi, izimo ziyafana yonke indawo, kodwa isisebenzi ngasinye izimo zivuma uhlele yakho isikhala siqu, njengoba oyifunayo.
Ukuqasha enhlanganweni, "Yandex"
Iziphakamiso ekuqaleni unikezwa zuku test, okuyinto kuhlobene ngokuqondile ukuqaliswa oluzayo umsebenzi. Ngokwesibonelo, uma indoda othi libeke esibonakalayo umklami "Yandex. TV Izinhlelo," khona-ke abenza umsebenzi ukuhlinzeka okukhethwa kukho ukuthi, noma Kwakubonakala isevisi isicelo ephathekayo.
Uma umsebenzi owawenziwa ukuba sihlangabezane nezimfuneko yenkampani, onguchwepheshe okwengeziwe uzothumela uchungechunge izingxoxo. Uzimisele ukusebenza njengoba umthuthukisi kwezinye izimo siqala eziningana ithimba kakade kahle esihlelwe ukunquma nabo kuyoba lula ukusebenza.
"Yandex" ihhovisi eMoscow has inombolo ethile abasebenzi, ngenxa okuyinto zifiki ngokushesha ukuthola ethimbeni. Kuyinto efiselekayo ulungise ngaphambi kokuqala umsebenzi.
Novice laptop ekhishwe ke okuxoxiswene kube usuku elikhuphuka ngalo kuyoba elula ukuqala ukusebenza. Kuze kube yimanje, inhlangano inohlelo esibonakalayo ifana "Yandex". Ngalo, ungakwazi ukubona ukuthi iyiphi izinsuku inqwaba zifiki ixhunywe inqubo yokusebenza. Lezi izinsuku zigqanyisiwe abomvu. Izinsuku lapho akekho usebenza - oluhlaza angawodwa.
Izinsuku zokuqala komsebenzi "Yandex"
abaphathi bathandile ngaphambi ukubeka umsebenzi omusha sha kusuka ngoMsombuluko. Kodwa ukuzivumelanisa inhlangano lochwepheshe is hhayi Kunconywa ukuba benze kanjalo. Lolu wusuku lapho inkampani siphela njengenhlangano Hural abamenyiwe, umhlangano ngokuhlanganyela nezinhloko abuye acoce zonke izindaba zakamuva, kuhlanganise izingqungquthela ngaphakathi eqenjini.
I ekahle kungaba uma umsebenzi ekuqaleni sondela them futhi ngeke unike bonke isikhathi sakho ukuthola ibheji nekhompyutha. Ngokuqondene nalokhu lisha ngokuvamile Kunconywa ukuza ehhovisi ngoLwesihlanu isikhathi sokuphumula ukuze ungene yonke imibhalo efanele, kokuthola laptop futhi ukuqalisa bajwayelane abasebenzi. A ngoMsombuluko kakade kahle ngabomvu umsebenzi wami ngokuzinikela.
Ezinyangeni zokuqala ezimbalwa yesisebenzi kuyothiwa itiye / ikhofi ukuze sithole ukuthi wayeqonda yonke into futhi kanjani, ngokuvamile, sihamba isikhathi sakhe. Ngezinye izikhathi imfundamakhwela kozakwethu ngezincwadi lapho abantu bengaphila azivumelanise inkampani futhi simazi nemithetho ngaphakathi enkampanini (ikakhulukazi lezi zisebenzi kumelwe ibhekane ukuqeqeshwa okukhethekile).
Kuyo yonke i-trial period zifiki wahlanganyela inkambo ukujwayelaniswa nazo zonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. It inhlangano abaphathi kukhona indaba iqala kanjani, yini amasu ukusebenza namuhla efaneleke kakhulu, amasu umsebenzi wokuvuselela izakhiwo ezintsha kanye ukuhluka amasevisi ukwenza imali. Ngemva kokudlula ezikhungweni nalesi sifundo, umqondisi uqhuba ngqo ingxoxo imfundamakhwela ukuqonda, aphambana ukuthi umbono wabo kulezi noma ezinye izindlela yokusebenza.
Futhi, inhlangano eqhuba abasebenzi block game yangaphakathi. Uma iphrojekthi uya ukusekela isigaba, bese bonke abantu abasebenze-ke, uma kubhekwa neminye imisebenzi ukuthi wayenokuthile okunenani ukwenza, they are cha lutho.
Inhlangano ukuqhutshwa komsebenzi
Office "ku-Yandex" kuyinto amahora angu-24 ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto eMoscow evulekile. yokuthengisa neminyango ezezimali benza umsebenzi wabo ngokwesimiso sansuku, sekuyisikhathi eside okuyinto laba yisicefe izinkampani kakhulu Russian ukuthi ngesikhathi umsebenzi ukuba njalo ku touch.
Ochwepheshe Unelungelo ukuza nganoma yisiphi isikhathi esikahle ngabo. Kukhona abantu abakhetha ukusebenza ebusuku, beza ehhovisi cishe 8 ntambama, ukuze bathola nasikhathi sokudla ngaphambi kokuba ivalwe ekamelweni lokudlela. Ngeke ubone ngokuqinile useyili noma emasofeni, njengoba abaholi ungafuni ukuthi bafakele abasebenzi babo ngokoqobo babehlala emsebenzini wakhe.
Empeleni zonke bekhulumisana nge e-mail. "Yandex" Ihhovisi has lenqwaba mailings yangaphakathi eMoscow mayelana lokuthi kuka imilutha amaqembu njengoba umsebenzi futhi yini ukukwenza. Ehhovisi, kukhona umthetho eyodwa elula, futhi sihlobana zangaphandle abasebenzi uhlobo, okubizwa ngokuthi yokugqoka. Lutho ekhethekile, kudingeka nje ukuza izingubo njengoba kwakunjalo lapho ezishisayo isikhathi umsebenzi enkampanini ziye sesiza ukusebenza Swimsuit. Ngokukhethekile ezimise cha, ungakwazi ukuza oyithandayo, kodwa hhayi ukugeza amasudi kanye izingubo zangaphansi.
Ihhovisi ingaphakathi inhlangano, "Yandex"
Iningi oupenspeysah inkampani "Yandex" kukhona Ottoman agqamile izihlalo, izindonga ezizungeze vinyl lodonga. Ngqo bangakwazi zilandisa emisha, ukupenda wabaphefumulela ukuba babhale ezihlukahlukene ihluzo namathebula. Uma sicabanga ngakho konke yizinhlobonhlobo yesixazululo design, emsebenzini basengaba ulungise ngokwalo. Ngaphezu imisebenzi ehhovisi khona ukuzilibazisa igumbi amabhuku (ngakho emtatsheni wakhe sendawo), lapho olungenziwa ukuboleka incwadi, axube umsebenzi wakho ibheji, ngoba ayikho nje yezincwadi.
On ehhovisi phansi sokuqala ekamelweni lokudlela, lwezikhathi okuyinto iqala ngo 9 ekuseni liphele at 9 pm. Ukuze sasekuseni ungakwazi nambitha iphalishi, ngiyocasha amaqanda, casseroles futhi amadombolo. Ngakho, lapho isidlo yesibili, itiye ntambama kanye dinner ungajabulisa izitsha ezivela emhlabeni wonke: imenyu has kokubili imiqulu kanye isobho nge ubhekeni. Abasebenzi nethuba ukuya ezinye amathilomu, khona ukukhokha abasebenzi babo amabheji. Nyanga zonke, umuntu ngamunye uthola a inani elimisiwe imali ukuphakela kule sikhundla phakathi neminyaka yakhe ngenyanga. Chitha imali awukwazi kuphela endaweni umsebenzi, kodwa futhi cafe eseduze, lapho ihhovisi uqobo, "Yandex" e Moscow (metro station "Ipaki Kultury").
Thina ukufundisa nekujabulisa
Ukuze ukukhulisa izinga labo, abasebenzi ungaya "Obuchator", okuyinto phezu ingosi yenkampani, lapho ungakwazi buka umhlangano isiqophi ngaphakathi inkampani lapho abantu ukwabelana amakhono abo.
Kukhona abaqeqeshi ekhethekile ukuthi ngokukhethekile izinhlobo ezahlukene ukuqeqeshwa e "Yandex" inkampani. Ihhovisi Ikheli (eMoscow) Itholakala enkabeni yedolobha, kukhona elula kakhulu.
I-Hydrocephalus yobuchopho ezisanda kuzalwa: izimbangela, izimpawu nezindlela zokwelashwa